Drones maka ndi nkiti na ojiji Professional, photogrammetry na nkeji.
Mara otú ngalaba kwụ ọtọ na-arụ ọrụ taa na-eme ka anyị nwee afọ ojuju nke ịmara mmalite nke ihe mana na-ejikwa ọganihu ọhụụ. Ọ na - eme maka anyị bụ ndị matara usoro ọdịnala eserese, na oke egwu ha; mgbe okirikiri akada, debugging, ịme ngosi uwe na ha na ikpeazụ ngwaahịa were izu,…
Apụta, innovations, topografia
Nkọwa GPS - Leica, Magellan, Trimble na Topcon
Ọ bụ ihe nkịtị, mgbe ịzụrụ akụrụngwa nyocha, ọ chọrọ iji GPS, ngụkọta ọdụ, ngwanrọ, wdg. Ezubere Geo-matching.com maka nke ahụ. Geo-matching bụ saịtị nke Geomares, otu ụlọ ọrụ ahụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ GIM International. Ọ bụrụ na anyị cheta, nnukwu ihe dị mkpa na magazin a bụ na ...
The Engineering Engineering na mmepe nke mba America
Nke a bụ aha First Ibero-American Congress nke Topographic, Geodetic na Geomatic Engineering nke ga-eme na Jalisco, Mexico. Ihe omume a na-akwalite ihe omume nke 11 Mexico Colleges of Topographical Engineers, ọ ga-abụkwa site na Ọktọba 16 ruo 18, 2013. Ebumnuche izugbe bụ ịkpụzi ọhụụ nke ọzụzụ ndị a na ...
SuperSurv bụ ngwa ọrụ emere maka GPS na gam akporo, dị ka ngwa na-ejikọ arụmọrụ GIS nke enwere ike ijide data n'ọhịa nke ọma na akụ na ụba. GPS na gam akporo Ihe odide a na-adịbeghị anya, SuperSurv 3 na-eme ka ekwentị dị mkpoko, na nhazi, ngosipụta map, ndụmọdụ, mmesho na nlekota ...
GPS / Equipment, mbụ echiche, SuperGIS
Kedu ihe Bentley na Trimble ruru?
Nke a dị ka amụma Eprel Fool, mana ọ bụghị. A awa ole na ole gara aga a mmekota nkwekọrịta e chie n'ọnụ ekwurịta banyere nke anyị nụrụ ihe n'azụ Mpaghara, na-ahapụ anyị ka anyị na-eche banyere ihe nwere ike na-eme n'etiti abụọ ụlọ ọrụ Bentley Systems na Trimble Akụkụ.…
Ngwakọta tebụl nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 ọdụ ụgbọ elu niile
GeoInformatics juru anyị anya na ọnwa a na mbipụta nke ọ na-egosi ọdụ ụgbọ elu 49 dị iche iche na tebụl ntụnyere nke nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ndị chọrọ ịme mkpebi n'oge ịzụta, yana ịdebe ihe nlereanya nke nwere sitere na ...